ग्रेटर नेपाल नया नेपाल की समृद्ध नेपाल? पक्कै पनि व्यबहारिक र हुनसक्ने कुरा गर्ने हो भने "समृद्ध नेपाल" नै यसको जबाफ हुन्छ।
तर बेला बेलामा चर्चामा आउन र भिड बटुल्न हामिकहा यस्ता नया नया नारा आउने गर्छन। न नया नेपाल बन्छ, न त ग्रेटर नेपाल सम्भव छ यि सब हावादारि गफ हुन ।
शान्ति पूर्ण नेपाल मात्रै भैदिए पनि कत्ती हुन्थ्यो?
विकट गाउंमा जी फर गन भनेर पढ्छन अनि शहरमा एम फर मनी भनेर पढ्छन । सिधै असमानताको खाडल झन बढाउन खोजेको हैन त कामरेडहरुले !
कि भोलि फेरि बन्दुक बोकाउन पर्यो भने त यी चाहिन्छन भनेर बन्दुकमै अल्झाउन खोजेको हो कुन्नि !
No doubt i want samridhi nepal, notagreater nepal
कोही कोही उपेन्द्रलाइ गाली गर्छन, कम से उम उनले उन्नतीको बाटो त देखाएका छन।